An-dalam-pahavitana koa ny lalana K4 miampita eny am K7. Hitohy amin'ny asa fanamboaran-dalana eny amin'ny K1 eny Antsambilo sy eny amin'ny K5 eny amin'ny voasary ny asa, hiarahana amin’ny ekipan'ny kaominina. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa elakelan-trano imasoan'ny kaominina amin'izao fotoana izao ireo fanamboarana ireo. Tafiditra ao anatin’ny fanambin’ny ben'ny tanàna Penjy Randrianarisoa amin’ny fampandrosoana ny tanana tsy an-kiandry moa izany. Ankoatra izay dia efa mipetraka ihany koa ny takamoa amin'ireo tanàna maro hanazavana ny tanàna ho enti-miady amin’ny tsy fandriampahalemana.